Dawlada Kenya oo u Muuqata in ay Badashay Shacbiya [Eritrea] – Rasaasa News
Sep 2, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Nairobi, [Sept 2, 2010] – Warar aad xiiso u leh oo aan ka helayno dalka Kenya ayaa waxay muujinayaan in dawlada Kenya ay badalidoonto xukuumada Eritrea oo si xoog leh u hubayn jirtay ururo ku kacsan dawlada Itobiya.
Dawlada Kenya ayaa waxay hoysiisaa dad badan oo Qaxooti Somaliyeed ah dadkaas oo isugu jira Somali ka soo carartay gabalka Ogaden iyo Somali ka soo carartay dalka Somaliya. Dadkaas ayaa waxaa hooy u ah Degmada Dhadhaab oo ay ka oodan yihiin sadex xero, oo ay UNHCR ku quudiso dadka Qaxootiga ah.
Gabalka NFD oo ay dagan yihiin dad Somali ah, ayaa ah gabal ay gumaysato dawlada Kenya. Kenya ayaa ah dal ay dimoqraatiyad ka jirto oo ay siyaasadiisu degan tahay. Waxaana uu soo jiitay dad aad u badan oo Somali ah kana kala timid dalka Somaliya iyo dalka Itobiya. Qaar ka mid dadka Somalida ee Qaxootinimada ku degay dalka Kenya ayaa waxay leeyihiin ganacsiyo aad u waaweyn iyo hanti.
Masuuliyiinta Somalida ah ee dalka Kenya ayaa aad ugu dhex jira arimaha dadka Somalida ah ee dhinaca siyaasada iyo dhinaca baayacmushtarigaba.
Dalka Kenya ayaa aad ugu liita dhinaca sharciga ilaalinta nafta iyo hantida dadka, horayna u noqday dalka aduunka ugu musuq-maasuqa badan.
Arintaas daraadeed Masuuliyiinta dawlada Kenya ayaa waxay si sharci daro ah u gabaanadaa ganacsatada shaciga ku degan dalka Kenya.
Dhinaca siyaasada, masuuliyiinta Somalida Kenya ayaa si sharci daro ah, waxay faraha ula galaan arimaha dalka Somaliya iyaga oo lacago ka qaata maamul gabaleedyada sida sharcidarada ah uga dhisma dalka Somaliya, kuwaas oo ay dhiiri galiyaan masuuliyiintaasi.
Gabalka NFD, oo ay ugu badan yihiin degaan ahaan Qabiilka Ogadeenka, ayey masuuliyiinta Somalida Kenya ku dhaqaan qabyaalad iyaga oo beelaha Ogadeenka qaarna fogeeya qaarna soo dhaweeya.
Masuuliyiinta Somalida Kenya ayaa waxay baryahan gacmaha si xoog leh ugula jiraan arimo ka dhan ah dalka Itobiya.
Heshiiska dhexmaray dhawaan dawlada Itobiya iyo Jabhadihii hore ula dagaalami jiray, ayey aad uga xumaadeen masuuliyiinta Somalida ah ee Kenya [maroodigu takarta saaran ma arkee ka kale takarta saaran ayuu arkaa].
Waxayna bilaabeen hanjabaadyo ka dhan ah dadka taageeray heshiiska nabada. Arintaas oo aan ilaa iyo haatan la garanaynin wax ku kalifaya, balse waxay dadka ku dhiiri galinayaan in dagaalka Itobiya lagula jiro la xoojiyo.
Waxaan malahayga isleeyahay waxay ka hortagayaan nabad iyo nolol ka dhacda dalka Itobiya gaar ahaana dhulka Somalida Ogadeeniya. Waayo dadka Kenya hantida ku leh oo ay badankoodu ka yimaadeen gabalka Ogadeen, waxaa dhici in ay maal gashadaan Itobiya.
Waxaan filyaa in ayna taageeraynin xoriyada ay hesho Ogadeen, hadiiba ay nabada ay iyagu haystaan ay u diidan yihiin.
dhabtiina NFD iyo Ogaden isku si ayey xoriyada iyo nolol ugu baahan yihiin.
Warar aad u hooseeya ayaa sheegaya in masuuliyiin Somali Kenyan ah iyo ganacsato ay dabada ka riixayaan ay xaabada u shidayaan sidii ay xabadu uga sii socon lahayd dhulka Somalida Ogadeeniya, balse waxaynu eegi doonaa kobta ay ku shubaan colaada ay miisayaan masuuliyiintaasi.
Waxaanu qormooyin dambe ku soo qaadan doonaa arimo badan oo xog ogaal ah, kuwaas oo khuseeya nabada ka socota dhulka Somalida Ogadeeniya iyo sida ay lugta u jiidayaan masuuliyiinta Somalida Kenya.
Guurti: Kulan Aad u Balaadhan oo ka Dhacay Nairobi